Ciidamada Khaliifa Xaftar oo lagu Jebiyay dagaal ka socda duleedka Caasimadda Liibiya.
Saturday April 06, 2019 - 20:32:30 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaallo culus ayaa dib uga qarxay wadanka Liibiya oo ay ku loolamayaan dawaaqiid dabadhilifya ah oo mid walba uu doonayo in uu la wareego maamulka wadanka.
Iska Hor'imaadyo xooggan ayaa lagasoo sheegayaa hareeraha magaalada caasimadda ah ee Daraabulis halkaas oo ay kulaalayaan maleeshiyaad katirsan dagaal oogaha murtadka ah ee lagu magacaabo Khaliifa Xiftar saacado kadib markii xaalad dagaal looga dhawaaqay wadanka.
Dagaal Ooge Khaliifa Xiftar oo kamid ah dhinacyada isku haya siyaasadda wadankaas ayaa maleeshiyaadkiisa amar kusiiyay in ay billaabaan duullaan Melleteri oo ay ku qabsanayaan magaalada Daraabulis ee caasimadda u ah wadanka Liibiya oo ay gacanta ku hayaan ciidamo taabacsan xukuumadda dabadhililifka ee lagu magacaabo alwifaaq.
Wrarka ka imaanaya Liibiya ayaa sheegaya in ciidamada Xiftar ay si nabad gelya ah kula wareegeen gacan ku heynta degmada gharyaan oo qiyaastii 100Km ujirta magaalada caasimadda.
dagaallo gacmaha layskula tagay ayaa shalay ka bilaawday degmada Alzaawiyah oo dhacda galbeedka magaalada caasimadd ah ee Daraabulis, wariyaal iyo dad goob joogayaal ah ayaa soo sheegay in ciidamada xukuumadda dadbadhilifka Alwifaaq ay dhabarka ka jebiyeen maleeshiyaadka Xiftar kuwaas oo doonayain ay qabsadaan magaalada Zaawiyah unasii gudbaan magaalada caasimadda ah.
Sarkaal katirsan ciidamada xukuumadda Alwifaaq ayaa warbaahinta ugu sheegay magaalada zaawiyah in ay gacanta ku dhigeen in kabadan 130 askari maxaabiis ah oo xiftar katirsan isagoo sidoo kale xaqiijiyay in ay qabsadeen 40 gaadiidka dagaalka ah oo ay wateen ciidamada duullaanka soo qaaday.
Warar maanta gelinkii dambe soo baxay ayaa sheegayay in ciidamada xukuumadda ay dib usoo ceshadeen madaarka caalamiga ee Daraabulis ayna kaabiga ku hayaan magaalada Gharyaan oo ah meesha kaliya ee ku hartay gacanta maleeshiyaadka Xiftar marka laga hadlayo hareeraha magaalada caasimadda ah.
Lama oga sida ay Xiftar ugu suurtageli doonto in uu dagaal ku qabsado caasimadda Liibiya wuxuuna lakulmayaa cadaadis dhanka diblumaasiyadda ah oo ugu baaqaya in uu joojiyo guluf dagaaleedka una diyaar garoobo wadahadal siyaasadeed.
Dagaallo Askar badan lagu dilay oo ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo.
Gaari xamuul ah oo ciidamada AMISOM looga gubay duleedka degmada Qoryooleey.